Voina am-perinasa :: Mpiasa roa lahy maty tototry ny tany • AoRaha
Voina am-perinasa Mpiasa roa lahy maty tototry ny tany
Nitrangana voina mampalahelo teny Ambohidreny- Ambohidraserika, fokontany Mahazoarivo, omaly, tokony ho tamin’ny sivy ora sy sasany maraina. Nihotsahan’ny tany ny mpiasa nanamboatra rindrin-tany lehibe.
Voatototry ny tany tao ny mpiasa telo lahy. Namoy ny ainy ny roa tamin’izy ireo, 67 taona sy 25 taona. Naratra ny iray ka efa nahazo fitsaboana teny amin’ny hopitaly. Afaka nanavotr’aina kosa ny efa-dahy ambiny.
Nosokirina avy tao ambanin’ny tany vao tafavoaka ny vatana mangatsiakan’ireo mpiasa roa lahy namoy ny ainy. Azo voalohany ny iray, minitra maromaro taorian’ny nisehoan’ny loza. Ny tola­kan­dro kosa vao tafavoakan’ny sampana mpamonjy voina avy tao ambanin’ny tany ny razana faharoa.
Niaraka nanamboatra rindrin-tany, izay sady hasiana rarivato, ireto lehilahy fito teny Ambohidreny Mahazo­arivo. Samy teo akaiky teo izy ireo no nanao ny asa. Nangady ny tany ny sasany. Tampoka teo, nihotsaka ny tany niaraka tamin’ny vato lehibe hanaovana ny asa. Nikoropaka ireo mpiasa. Tao anatin’ny fotoana fohy no nisehoan’ny loza. Tototry ny tany ny mpiasa telo lahy.
“Ny tapany ambany no voatsindrin’ny tany tamin’ilay lehilahy iray. Avotry ny fokonolona tao izy. Tsy misy ahiana ny fahasalamany araka ny vaovao voarainay farany”, hoy ny olona iray mipetraka eny an-toerana.
Nantsoina ny sampana mpamonjy voina. Niatrana teny an-toerana nanao ny fanaraha-maso ny manodidi­na ny polisy. Natao avy hatra­ny ny fikarohana an’ireo tavela ao ambanin’ny tany. Nohadiana ny teo amin’ny faritra he­verina ho misy azy ireo. Tafa­voaka ny razana iray, tamin’ ny 10 ora sy 40 minitra. Nitohy ny asa famonjena. Hita avy eo ny vatan’ilay lehilahy faha­roa. Tokony ho tamin’ny roa ora tolakandro vao tafala tao ny vatana mangatsiakany.
Fakana am-bavany nitera-doza :: Lehilahy voatsindron’antsy tao amin’ ny biraon’ny polisy